NgoFebruwari 2021-Funda ukuRhweba
Inyanga: February 2021
I-NZD / i-USD Slumps ukuya kwiNqanaba 0.7228 njengabaThengisi abaPhezulu kuMmandla oThengisiweyo
Ukuhlaziywa: 28 Februwari 2021
Amanqanaba okuGxila aphambili0.7000, 0.7200, 0.7400
Amanqanaba enkxaso aphambili0.6200, 0.6000, 0.5800
I-NZD / iXabiso leDola yeXesha elide iTrend: Ukuthwala
I-Kiwi iyehla njengoko abathengisi bevela kwingingqi ethengiweyo. Imakethi yehle kwinqanaba eliphantsi le-0.7228. Ukuba ixabiso lifumana inkxaso ngaphezulu kwee-SMAs, ukunyuka okuphezulu kuya kuqhubeka.
I-Kiwi iwele kwinqanaba lama-49 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Ibonisa ukuba kukho ulungelelwaniso phakathi konikezelo kunye nemfuno. I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zijike phezulu zibonisa umgaqo ophezulu.
I-NZD / i-USD yeXesha eliPhakathi leTrend: Ukuthwala
Kwitshathi yeeyure ezi-2, isibini se-NZD / USD sikwi-downtrend. Nge-26 kaFebruwari idowntrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya amanqanaba angama-78.6% eFibonacci. Ukufakwa endaweni kwakhona kubonisa ukuba isibini siza kuwa kwinqanaba le-1.272 Fibonacci. Eli linqanaba eliphantsi le-0.7193.
I-NZD / i-USD-2 Itshathi yeYure
Iintsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-21 zee-SMAs zihle ziye ezantsi. I-Kiwi ingaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike yinyani ye-bearish kwaye iwele kwindawo ethe kratya kwintengiso.
Isibini se-NZD / USD sinezokonakala ngesiquphe njengoko ixabiso lifikelela kwinqanaba le-0.7228. Ixabiso liya kuqhubeka ukwehla ukuba uxinzelelo lokuthengisa luyehla phantsi kwee-SMAs.
Ixabiso leXRP / i-USD: Ngaba kuya kubakho ukuqhekeka kweBarish kwinqanaba le- $ 0.9?
Ukuhlaziywa: 1 Matshi 2021
Intengiso yeXRP / USD ngoFebruwari 02
Ukuba iibhere ziyaphula inqanaba lenkxaso kwi-0.39 yeedola, emva koko, kuvavanywa ixabiso leedola 0.28 kunye nexabiso leedola le-0.21. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso le- $ 0.39 libambe, ixabiso linokutsiba kwaye lijongane nenqanaba lokumelana ne- $ 0.49, $ 0.63 kunye ne- $ 0.73.
I-XRP / iMarike ye-USD
Amanqanaba okumelana: $ 0.49, $ 0.63, $ 0.73
Amanqanaba enkxaso: $ 0.39, $ 0.28, $ 0.21
I-XRP / i-USD yexesha elide: Ukuthwala
Kwitshathi yemihla ngemihla, i-XRP / i-USD iphantsi. Iibhere zilawula imakethi yeXRP. Isenzo sexabiso senze iipatheni eziphezulu zeetshathi kwitshathi yemihla ngemihla. Isibini semali siphantsi kolawulo lweenkunzi zeenkomo. Inqanaba lokumelana ne- $ 0.63 lavavanywa ngoFebruwari 14. Yatsala kwakhona ukubuyisa inqanaba lenkxaso le- $ 0.49. Iinkunzi zilinyusele phezulu ixabiso ukuvavanya inqanaba lokumelana ne- $ 0.63 okwesibini ngoFebruwari 22. Kuthetha ukuba inqanaba lokumelana ne- $ 0.63 limi njengesithintelo esiqinileyo kwimali. Ixabiso liwela kwinqanaba leedola le-0.39 ngaphambi kokuba kuvalwe imakethi.
Itshathi yemihla ngemihla yeXRPUSD, ngoFebruwari 28
Amaxesha ama-9 ama-EMA awela i-21 lamaxesha e-EMA kwicala eliphantsi kwaye ingqekembe ithengisa ngaphantsi kwenkxaso enamandla kunye nenqanaba lokumelana kwindawo eyi- $ 0.39. Ukuba iibhere ziyaphula inqanaba lenkxaso kwi-0.39 yeedola, emva koko, kuvavanywa ixabiso leedola 0.28 kunye nexabiso leedola le-0.21. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso le- $ 0.39 libambe, ixabiso linokutsiba kwaye lijongane nenqanaba lokumelana ne- $ 0.49, $ 0.63 kunye ne- $ 0.73.
I-XRP / USD yeXesha eliPhakathi leTrend: Ukuthwala
Kwimbonakalo yexesha eliphakathi, i-XRP / i-USD yi-Bearish. Ixabiso lakhupha inqanaba lokumelana ne- $ 0.63 emva kokuvavanya inqanaba elikhankanyiweyo amatyeli amabini. Iibhere zikwazile ukunyusa uxinzelelo lwazo, amaxabiso okwangoku ayancipha ukuya kwinqanaba le- $ 0.39.
Itshathi ye-XRPUSD yeeyure ezi-4, ngoFebruwari 28
Ixabiso leXRP liwele ezantsi ezixhasayo kunye nenqanaba lenkxaso le- $ 0.49 njengophawu lwentshukumo ye-bearish. Ukwehla okuthe kratya kwixabiso leXRP kulindelwe kakhulu. Ixesha lesalathiso sokomelela kwesihlobo linxulumene nesalathiso sokubonisa umqondiso wokuthenga. Njengangoku, ixabiso leXRP lithengisa ngaphantsi kwamaxesha e-14 EMA kunye namaxesha angama-9 ee-EMA. Inqanaba lenkxaso kwi-21 yeedola linokungena ngaphakathi kwaye ixabiso liyaqhubeka nokukhula kwaso.
tags Marketing, Uhlalutyo Technical, XRPUSD
IsiCwangciso seStimulus sikaBiden esiyi-1.9 yezigidi zezigidi Isicwangciso soPhuculo sinokuthi siphakamise iGreenback
Isindululo sika-Mongameli-wase-US u-Joe Biden sokuba agalele i-1.9 yezigidi zeerandi kuqoqosho oluthandwayo angabeka isiseko sokwanda kwemisebenzi kunye nenkcitho abathi uninzi lwezoqoqosho luthi luyadingeka ukunqanda umonakalo wexesha elide kubangelwa kukudodobala ko bhubhane.
NgoMgqibelo, i-US House of Representatives yadlulisa imali kaMongameli uJoe Biden ye- $ 1.9 yezigidi zezigidi zeerandi nge-219-212 iivoti. Inkxaso yeRiphabhlikhi ibilahlekile, kodwa umthetho oyilwayo wafudukela kwi-Senate, apho kulindeleke ukuba idlule phambi kwe-Matshi 14, xa umjikelo wangaphambili wenkuthazo uphela. NgoMgqibelo kwakhona, uMongameli Biden wabiza iSenethi ukuba idlulise umthetho oyilwayo wokukhuthaza.
I-greenback ixabise kabukhali ekupheleni kweveki, iyigqibezela ngeenzuzo ngokuchasene nazo zonke iimbangi zayo ezinkulu. Izalathiso zehlabathi zivaliwe ngelahleko ezibukhali, ngaphandle kweNasdaq ekwaziyo ukuthumela kwangaphambili.
Izivuno zikaNondyebo wase-US ziyaqhubeka nokubuyela umva ngaphambi kokuvalwa kweveki nganye, kodwa oko akuzange kuthintele idola ekuxabiseni. Isivuno kumgangatho weminyaka eli-10 kaNondyebo sihleli kwi-1.40% emva kokuphakama konyaka omnye we-1.61% phakathi evekini.
Uqoqosho lwase-US luqale kakuhle kwi-2021
Abahlalutyi sele beqalisile ukumakisha uqikelelo lwabo lokukhula koqoqosho kulo nyaka emva kokuba unyulo luhambise ulawulo lwazo zombini izindlu zeCongress kwiiDemokhrasi. Inkcitho entsha iza ngexesha elibalulekileyo kuqoqosho olukhulu lwehlabathi.
NgoJanuwari, inkcitho yobuqu inyuke ngesantya esomeleleyo se-2.4%, ngelixa umvuzo wobuqu unyuke nge-10.0%. Isiseko se-PCE deflator saphakama nge-0.3% phakathi enyangeni kunye ne-1.5% ngaphezulu konyaka. Usihlalo weFed uPowell wangqina phambi kweCongress kwaye wakugxininisa ukuzibophelela kwe-FOMC ekugcineni umgaqo-nkqubo wezemali, njengoko uqoqosho lwase-US lusaqhubeka ukubuyela kwimeko ye-COVID.
Iphakheji entsha, ekusafuneka ivotelwe yiCongress, iya kuzisa i-5.2 yezigidigidi zeedola isikhuthazo semali esipheleleyo esihanjiswe kuqoqosho lwase-US okoko yaqala le ngxaki, ilingana nekota yemveliso yoqoqosho yonyaka e-US.
tags UMongameli uJoe Biden, Umthetho osayilwayo waseMelika
Ixabiso lesilivere: IXAGUSD ihlala phantsi koxinzelelo phantsi kwe- $ 28.00 yenqanaba njengeDola yokuqokelela amandla
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-Februwari 28
Isibini seXAGUSD siphulukene nomfutho ophakamileyo phantsi kwenqanaba le- $ 28.00 ngexesha leseshoni yangaphambili njengoko uxinzelelo lwabathengisi luthatha ixabiso lokufika kwinqanaba eliphantsi le- $ 26.13. Kule veki intsha, isibini sinokuhlala sikhathazekile phantsi kwenqanaba lama- $ 28.00 njengoko idola yaseMelika inokuqokelela amandla okonyuka kwezivuno.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 28.90, $ 27.92, $ 26.77
Amanqanaba enkxaso: $ 26.00, $ 25.00, $ 24.00
Abathengisi beXAGUSD baphinda kulawulo lwexesha eliphakathi, njengoko ixabiso liqhubeka nokuhlasela kufutshane nendawo yenkxaso ethe tyaba okwangoku ejikeleze inqanaba le- $ 26.00. Ngaphantsi kwenqanaba kwi-26.00 yeedola ilindele inkxaso yenkqubela yokunyuka enokuthi isebenze njenge-backstop iyenze isiseko esomeleleyo seebhere.
Isinyithi esimhlophe siye sathintela ukuxhathisa okuthe tyaba komyinge we-5 kunye ne-13 imiqobo ngelixa sisaphula ngaphantsi kwenqanaba lama- $ 26.00 kunokuvula iingcango zovavanyo lwendawo ethe nkqo ethe tyaba kwinqanaba le- $ 25.00 kumandla e-USD. Isalathiso samandla esiSondlo semihla ngemihla (i-RSI) esiya ngasezantsi sivumela ulungiso olungaphezulu.
I-XAGUSD yagqityelwa ukubonwa ishukuma kufutshane nezantsi kwitshathi yayo yeeyure ezi-4, ejikeleze ingingqi eyi-26.67 yeedola. Okwangoku, izikhombisi zobuchwephesha kwitshathi yeeyure ezi-4 zifumene ukubambeka okungalunganga kunye nethemba lokuxhasa ubuthathaka obongezelelweyo. Oko kwathiwa, isaphulelo esibonwe kwityala elifutshane le-RSI ngaphambi kokuma kolunye uguquko.
Ikhefu eliqinileyo phantsi kwenkxaso ethe tyaba kwinqanaba le- $ 26.00 linokuvula umnyango oya kumanqaku asezantsi kwinqanaba le- $ 24.50. Kwiphepha le-flip, ekujolise kuko okulandelayo kulindelwe kwinqanaba le- $ 27.50 yenqanaba. Inkxaso ephambili yexesha elizayo iza kwinqanaba le- $ 25.00 eligcina isango lokufumana ubuthathaka besilivere ukuya kwinqanaba eliphantsi lama- $ 24.01.
tags Isilivere (XAG), Uhlalutyo Technical, XAGUSD
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin-Februwari 28
Ukulandela ukusebenza okuphucukileyo ngoMgqibelo, Bitcoin (BTC) yehle kabukhali ngezantsi kwenqanaba lama- $ 44k. Ukwehla kwe-BTC kutsha nje kurhuqele umzi-mveliso we-altcoin, kubangela ukuba lonke uqoqosho lwexabiso lemarike yemali ehle nge- $ 120 kwiiyure ezimbalwa. Nangona kunjalo, i-Bitcoin ibuyile kwinqanaba le-45k yeedola ngexesha lokushicilela.
Oko kwathiwa, ixabiso lentengiso yeBitcoin liyaqhubeka nokutyibilika, kunye ne-cryptocurrency ebonakalisa uphawu lokulahleka okungaphezulu kwe- $ 200 yezigidi kule veki iphelileyo.
Okwangoku, i-CryptoQuant, i-cryptocurrency analytics firm, ixele kutshanje ukuba ukuwa kwexabiso leBitcoin kunokuba ngenxa yokuthatha inzuzo ngabavukuzi kulandela ukuqhuba kweenyanga ezininzi. Inkampani yohlalutyo ilandelele ukuphuma okuphuma kwemali kwizipaji zabo ukuya kutshintshiselwano ngaphambi nje kokudilika ukusuka kwi- $ 58,000 ukuya kwi-45,000 yeedola nokusuka kutshanje kwe- $ 50,000 ukuya kwi- $ 45,000.
Kwezinye iindaba, intengiso ye-altcoin irekhode idiphu embi nangakumbi. Ethereum (ETH) yawa nge-10 yeepesenti yokutsiba kwaye yehla ngezantsi kwenqanaba le- $ 1,350. Ukuqonda okungcono, ixabiso le-Ethereum lifikelele kwi- $ 2,050 kwiintsuku nje ezisibhozo ezidlulileyo.
ICardano (ADA), esebenze kakuhle kakhulu ngaphambili ngoku, yehle ngaphezulu kwe-12% ukuya kwi-1.2 yeedola. Okwangoku, IPolkadot (DOT), I-Ripple (XRP), Litecoin (LTC), kunye neBitcoin Cash (BCH) zonke zithumele ukwehla okubonakalayo nakwi (-9%), (-6.5%), (-10%), kunye (-9%), ngokwahlukeneyo.
Amanqanaba aphambili eBTC okuBukela-ngoFebruwari 28
I-Bitcoin kunzima ukuyifumana kwakhona nayiphi na inkuthazo, njengoko iibhere zibonakala zikwisitulo sokuqhuba kade. I-cryptocurrency yehlulekile ukwenza imali kwi-reboundish yayo elungileyo evela kwindawo yeedola ezingama-44k izolo kwaye yathunyelwa kwangoko apha ngezantsi komda weedola ezingama-44k kwangoko namhlanje.
Oko kwathethi, kuye kwavela umkhondo we-bearish kwaye ucebisa ukuba ukwehla okuninzi kunokulandela kwiiyure okanye kwiintsuku ezizayo. I-Bitcoin kufuneka iphinde ibuyise uzinzo ngaphezulu kwe-48,500 ye-pivot zone ukuze ilahle imeko yangoku ye-bearish.
Okwangoku, amanqanaba ethu aphikisayo akwi- $ 46,000, $ 47,500, kunye ne- $ 48,500. Ngelixa amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 44,000, $ 43,000, kunye ne- $ 42,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.35 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 832 billion
I-Bitcoin Dominance: 61.6%
I-Ethereum iza phantsi koxinzelelo, njengezinye iiBlockchains zijolise kulawulo
Ukusetyenziswa okukhulayo kweeprothokholi zeDeFi kunye nokusetyenziswa kwezicelo okwabelweyo Ethereum ibonakala ngathi igcwele ngaphezulu kwinethiwekhi ukuya kumrhumo wentengiselwano ongazinzanga. Oko kwathethileyo, ii-ecosystems ze-cryptocurrency ngoku zikugqatso lokurhwebesha u-Ethereum phakathi koku “Tyibilika,” kunye ne-Binance CEO, u-Changpeng Zhao, uxhasa i-Binance Smart Coin (BSC) ukuze iphume phambili.
I-CEO, eyaziwa ngokuba yi-CZ, ihlasele u-Ethereum kwi-Twitter kutshanje, iqaqambisa iifizi zenethiwekhi njengezo zayo “Isithende sika-Achilles,” Yongeza ukuba ngabantu abazizityebi kuphela abanakho ukurhweba nge-Ethereum.
Amabango e-CZ awanasiseko, njengoko umndilili weendleko zentengiselwano kwi-Ethereum inyuke ukusuka ngaphantsi kwe- $ 5 ngokomndilili kunyaka ophelileyo ukuya kuthi ga kwi-15 yeedola ngexesha lokushicilela. Kwiintsuku nje ezine ezidlulileyo, iifizi zenethiwekhi ziphakame malunga ne-40 yeedola ngokomndilili. Ngale nto, abathengisi abasebenza kwiDeFi okanye amaqonga ezolimo ajongana neefizi zokuthengiselana eziphezulu njenge- $ 100 kurhwebo ngalunye oluthathwa yonke imihla.
I-CZ iphindwe kabini kumcaphukisi wakhe ngokuchasene no-Ethereum, wathumela umyalezo nge-tweeting ukuba akasasebenzisi inethiwekhi. U-Binance okwangoku uphuhlisa iiprojekthi ezimbini (i-Binance Chain kunye ne-Binance Smart Coin) ukukhuphisana nezona zimbini zibhloko zibalulekileyo kushishino.
I-Binance Chain iyilelwa ukuququzelela iintlawulo ezikhawulezayo ngentlawulo ephantsi. Le projekthi iya kuba ngumncintiswano kunye Bitcoin ngenxa yenjongo yayo encinci; ukuthumela nokufumana imali. Kwelinye icala, i-Binance Smart Chain iququzelela ukwenziwa kwezivumelwano ze-smart ngendlela efanelekileyo ngakumbi kunye ne-pocket-friendly kune-Ethereum.
Umdyarho oya kwiDethrone Ethereum
Ukunyuka ngokukhawuleza kweeprojekthi ezinje Ipolka dot, I-Binance Smart Chain, kunye neCardano luphawu lokuxela ukuba kukho ugqatso olusebenzayo lokutshintsha i-Ethereum. Izolo, ICardano (ADA) Ibe yindawo yokugcina imali yesithathu ngobukhulu, egqithisileyo I-Binance Coin (BNB).
Njenge-BSC, uCardano ucwangcisa ukwenza iikhontrakthi ezifanelekileyo ngexabiso eliphantsi, ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo. Nangona kunjalo, uCardano uqhuba uthungelwano oluntsonkothileyo kunye nemephu yendlela ende kakhulu xa kuthelekiswa neBSC.
Nangona kunjalo, abaphuhlisi be-Ethereum abahlali ngezandla zabo phakathi kwale ndawo yokulawula kodwa basebenzela ukudala inguqulelo entsha kunye nephucukileyo ye-blockchain yabo ekhoyo. I-Ethereum 2.0, njengoko ibiziwe, iya kuba nophunyezo oluninzi-2. Ngokuka-CEO we-Ethereum, uVitalik Buterin, ibhloko entsha entsha iya kubanakho ukuqhuba amakhulu amawaka eentengiselwano ngomzuzwana nje ukuba sele isetyenziswe ngokupheleleyo.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH): Ukuhla kwe-Ether, ngoMeyi kungafikelela kwii-Lows ze- $ 1,200 okanye i- $ 1,000
Iinkunzi ze-Ethereum zisokola ukubamba ngaphezulu kwe-1,300 yeedola yenkxaso
Eyona altcoin inkulu iya kudilika kwakhona ukuba inkxaso yangoku kwi-1,400 yeedola yaphulwe
Ixabiso langoku: $ 1,354.55
Intengo yeNtengiso: $ 156,343,211,173
Umthamo wokuThengisa: $ 22,578,249,561
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngoFebruwari 28, 2021
Iinkunzi ze-Ethereum zisokola ukubamba ngaphezulu kwenkxaso ye- $ 1.300 njengoko abathengisi besoyikisa ngokufutshane. Lo mjikelo wesibini we-downtrend ubangelwe kukusilela kweenkomo ukugcina ngaphezulu kwe-1,700 yeedola. Ukulandela ukwaliwa kwayo nge-1,700 yeedola, ingqekembe yawela kwi-1,400 yeedola yabuya. I-Pullback yayihlala ixesha elifutshane ngaphezulu kwe- $ 1,500 ephezulu njengeebhere ezityhale ixabiso elingaphantsi kwe- $ 1,400 yenkxaso. Iibhere ziye zaphula inkxaso yangoku njengoko ixabiso liwela kwi-1,364.80 yeedola ngexesha lokubhala. Silindele ukuba ixabiso lifikelele kwi-lows ye- $ 1,000 okanye i- $ 1,200.
Ixabiso le-crypto liwele ngaphantsi kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba u-Ether uwele kwindawo ethe kratya kwintengiso. Kwingingqi ethengiswe ngaphezulu, abathengisi banokuvela batyhale amaxabiso ezantsi. I-crypto ikwinqanaba lama-34 le-Index ye-Relative Strength period 14. Ingqekembe ikwi-downtrend zone kwaye ingaphantsi kwe-50.
I-Ethereum inokuqhubeka nokuhla kwayo. Ixabiso liwele kummandla ogqityiweyo. Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe kuFebruwari idowntrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyisa le-Fibonacci engama-23%. Oku kubuyiselwa endaweni kuthetha ukuba i-ETH izakuwela kwinqanaba le-61.8 yeFibonacci extensions okanye isezantsi se- $ 1.618.
Idola yokurhweba yomelele, ivelisa ukwanda njengoko ukuThengiswa kweNtengiso yeStock
Izitokhwe zase-US bezikhe zabethwa ngothengiso olungqongqo ngasemva kokunyuka kwesivuno sikaNondyebo, kwaye ukuthengisa kuyaqhubeka kurhwebo lwasemini. Ngexesha lokuthunyelwa, nangona isivuno sikaNondyebo sisezantsi kancinci namhlanje, isitokhwe sihleli ebomvu. Ixesha elizayo lase-US likhomba ekuvuseleleni, kodwa akukho themba lincinci ukubuyela kwakhona kunokuqhubeka kude kube sekupheleni.
Emva kokunyuka kuyo yonke le veki, izivuno zebhondi zaseMelika zabuya umva kakhulu ngolwesiHlanu, njengoko ukuthengwa kweebhondi kwenyuka kufikelela esiphelweni sentengiso e-US. Ukuthengisa kubonakala kakhulu ekupheleni kwexesha elide lejika likaNondyebo wase-US, ethe tyaba kabukhali; Izibophelelo zeminyaka engama-30 ziphantsi phantse nge-19bp namhlanje. usuku lube ngaphezulu kwe-2.10%.
Abatyalomali bacola izimvo ezivela kumagosa asebhanki esembindini ngokwenyuka kwexesha kunye nokunyuka kwamaxabiso. Ngokukodwa, isithethi se-ECB siphawule ukuba ukunyusa inkuthazo yomgaqo-nkqubo kunokufuneka ukuba izivuno zinokuthintela inkxaso efanelekileyo kwangoko. Ingcali yezoqoqosho kwiBhanki yaseNgilani ikwalumkisile ukuba ukunyuka kwamaxabiso okungalawulekiyo ngoku kubeka umngcipheko omkhulu.
Ngaphandle kokuntywila ngoLwesihlanu, isivuno sebhondi sibonakala siphela iveki isixa esifanelekileyo esiphakamileyo kunokuba beqale; Isivuno seminyaka eli-10 sezibophelelo siphezulu malunga namanqaku asisiseko ama-6 ukusuka kumanqanaba okuvula wangoMvulo malunga ne-1.36%, kunye neminyaka ye-10 ye-TIPS isivuno siphezulu malunga ne-7 yamanqaku asisiseko asezantsi kwe -0.8% kule veki.
I-Index yeDola yaseMelika (i-DXY) ijongana noMqobo oPhezulu
Isalathiso sibuyisa ilahleko yangoLwesine kwaye sinyuke ngaphezulu kwe-90.00 ngasemva kwesaphulelo esomeleleyo kwi-benchmark yeminyaka eli-10 yase-US.
Ukuhamba kwiminyaka eli-10 kaNondyebo kunika amanqanaba okugqibela ukubonwa malunga nonyaka ophelileyo kukhokelele ekubuyisweni okuqinisekileyo kwesalathiso ukusuka kumanqanaba angaphantsi kwe-90.00 ngoLwesine kwaye kwavumela isalathiso ukuba sihambele kwiincopho zeentsuku ezininzi kwindawo ye-90.75 / 80. ULwesihlanu.
Kwirejista, ukunyuka kwamaxabiso e-US, kulinganiswa ngesihloko sePCE kunye neCore PCE metric, inyuke nge-0.3% MoM ngoJanuwari kunye ne-1.5% YoY. Ngokwedatha eyongeziweyo, intsilelo yorhwebo ephumayo, eqikelelwa kwi- $ 83.74 yezigidigidi kwinyanga ephelileyo, ngelixa ingeniso yomntu inyuke nge-10.0% MoM kwinyanga yokuqala yonyaka, kunye nenkcitho yobuqu inyuke nge-2.4% xa kuthelekiswa nenyanga ephelileyo.
tags KwiDola yaseMelika, Iimarike zeStock zaseMelika
IPolkadot kunye neCardano ziya kudlula kwiXabiso leBitcoin: FD7
Ingxowa mali yotyalo mali esekwe eDubai, i-FD7, ikholelwa ukuba ixabiso le ICardano (ADA) kwaye IPolkadot (DOT) izodlula leyo Bitcoin (BTC) kwiminyaka ezayo. Ngenxa yoko, ifemi ibhengeze ukuba izakukhuphela malunga ne-750 yezigidi zeerandi zayo ze-BTC kwaye inyuse ukubonakaliswa kwayo kwi-ADA nakwi-DOT.
I-FD7 (iwa phantsi amaxesha asixhenxe) iiVentures zizichaza njengengxowa-mali ejolise kutyalo-mali ethi "Utyalomali koosomashishini abama okwesibhozo" kwaye ine- $ 1 yezigidigidi kwimpahla ephantsi kolawulo etyalwe kwii-asethi ezininzi ze-crypto, kubandakanya iBitcoin, i-Ethereum, iPolkadot, iCardano, neCosmos.
Ifemu yotyalo-mali iqaphele ukuba sele iqalile ukucothisa kancinci i-Bitcoin eyi- $ 750 yezigidi ngelixa kwangaxeshanye inyusa ukubanjwa kwayo kwi-ADA nakwi-DOT.
I-FD7 iqinisekisile ukuba olu tshintsho lotyalo mali luya kuthi "Basebenze ngcono iimfuno zabatyali mali be-FD7 abajonge ukwahlula iipotifoliyo zabo kwindawo ekhulayo ye-cryptocurrency."
Ngeli xesha, uMlawuli oPhetheyo wengxowa-mali, uPrakash Chand, wayenamagqabantshintshi nge-benchmark cryptocurrency emva kwesibhengezo. Uthe: "Ngaphandle kwenyani yokuba iBitcoin yayiyeyokuqala kwintengiso kwaye uluntu luyinike intsingiselo njengevenkile enexabiso, ndicinga ukuba iBitcoin ayincedi nganto."
Ngapha koko, waqaqambisa amathemba e-cryptocurrensets ezinje nge-Ethereum, Cardano, kunye nePolkadot, eqonda ukuba "Iya kuba nexabiso elingaphezulu kweBitcoin kule minyaka imbalwa izayo."
I-FD7 Lauds ADA kunye nabaseki beDOT
Kwezinye iindaba, ukukhutshwa kweendaba kudumise abasunguli beCardano kunye nePolkadot, uCharles Hoskinson kunye noGqirha Gavin Wood, ebachaza njengo "Ezimbini zeengqondo eziqaqambileyo ezisebenza kwindawo yokuphuhlisa i-crypto namhlanje" kwaye yaqaqambisa igalelo labo ekusekweni kweminyaka ye-Ethereum eyadlulayo.
Ingxowa-mali iqaphele ukuba isigqibo sayo sokungena kwi-ADA kunye ne-DOT sasisekwe ikakhulu kulwazi lwee-cryptocurrensets.
Ngeli xesha, uHoskinson uphendule iindaba ngeakhawunti yakhe yeTwitter, esithi i-FD7 yamkelwe kwinkqubo yendalo yeCardano kwaye ikulungele ukubonelela ngoncedo lobuchwephesha xa kufuneka njalo.
tags Bitcoin, Cardano, Cryptocurrency, Ipolka dot
← Entsha izithuba1 2 ... 25 abaDala izithuba →